के दुबईमा सलमान खानको १७ वर्षीको छोरी छ ? दुबईमा सलमान खानकी श्रीमती र एक छोरी रहेको दाबी! सलमान खान लाई आयो यस्तो आरोप – Sandesh Press
July 22, 2021 210
बलिउड अभिनेता सलमान खान भाई अरबाज खानको कार्यक्रममा आउँदै गर्दा आफ्ने बारेमा खुलासा गरे । एक जना महिलाले दुबईमा सलमान खानकी श्रीमती र एक बच्चा रहेको दाबी गरिन् । सलमानले पनि यस दावीमा आश्चर्य व्यक्त गरे। सलमान खान मात्र होइन, धेरै कलाकारको बारेमा त्यस्ता खुलासहरू भएका छन्। कहिलेकाहीं अचानक कसैले आफ्नी पत्नी, सेलिब्रेटीको प्रेमिका भएको दाबी गरेको छ, तब कसैले उनीहरूको बच्चा भएको खबर फैलाएका छन् । यी समाचारहरूमा कत्तिको सत्यता छ भनेर थाहा छैन, तर यसबारे धेरै शीर्षकहरू बनिसकेका थिए।
सलमान खानको सम्बन्धमा, एक प्रयोगकर्ताले दावी गरे कि उनले गोप्य रूपमा विवाह गरे जसको उनको १७ वर्षीया छोरी छ। प्रयोगकर्ताले लेखेका छन् कि सलमानले आफ्नी पत्नी नूर र १७ वर्षीया छोरीलाई लुकाएर राखेका छन्। यद्यपि सलमान खान त्यस्ता कुरामा पटक्कै सहमत छैनन्। यसको विपरित, तिनीहरू यसलाई एक मूर्ख को संज्ञा दिन्छन् , जसमा उनले प्रतिक्रिया दिन पनि चाहँदैनन्।
Prevविहिवार विहान काठमाडौको सडकमा देखिएको अनौठो दृष्य, जसले सबैलाई अचम्म बनायो !
Next‘स’म्भोग अघि म’हिलाको ९ रु’चिहरु, जुन हरेक पु’रुषले जा’न्नै पर्ने हु’न्छ’ ।